XAASKAAGA XALAASHA AH, waqti kasta iyo meel kasta oo jirkeeda ka mid ah ayaad kaga raaxaysan kartaa, meelaha iyo waqtiyada uu sharcigu diiday mooyee | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
Comment by farhaan on January 1, 2012 8:28 pm
Marka laga soo tago macaanka raaxeed ee galmada laga helo iyo ubadka ayaa waxa jira faa`idooyin kale oo uu leeyahay
Baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday in galmada ay u wanaagsan tahay ka hortagista xanuunada laga qaaado qaboowga , waxaa kale uu ka hortagaa kansarka taasi oo ay sii dheer tahay iyadoo nafta u soo jiido xasillooni iyo qabow.
Baarayasha waxa kale ay sheegeen in galmada sido kale jirka ay u wanagsan tahay jirka iyadoo halkii galmo oo ad sameyso ay la mid tahay adiga oo masaafo dhan hal mayl socday ama fuulay ama ka soo degay jaran – jarada labo dabaq.
Comment by farhaan on January 1, 2012 8:24 pm
Sidoo kale galmada ayaa u wanaagsan dheef-shiidka iyadoo galmo macaan oo dhex marta labada lamaane muddo u dhaxeysa 20-ilaa 30-daqiiqo ay keeneyso in si wacan u dheef shiidmo cunadii iyadoo sido kale gubeysa 85-heer kulka cunaadii caloosha gashay.
Ogoow Qurixi Waa Diin Geeddi jacayl iyo godobtii qarsooneyd! qisso jacayl Qeybtii 8aad